विचार | eBachan Nepali Christian Magazine | Page 3
पा. विजय कर्माचार्य मत्ती १६ः१३ मा येशूले चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनि भन्दछन् ? र दोस्रो प्रश्न उहाँले सोध्नुभयो तिमीहरूचाहिं को हो भनेर भन्दछौ ? यो संसारका हरेक मानिसलाई सोधिएको प्रश्न हो, जसले मानिसको वर्तमान र भविष्यलाई असर गर्दछ । हामी संसारमा कसैको बारेमा कस्तो सोच राख्दछौं, चाहे त्यो राजनीतिक, व्यापारिक, वौद्धिक क्षेत्रको बारेमा नै ...	Read More »
येशू ख्रीष्टको चाँडै फिर्ती लागि प्रमाण भारी छ। यो कुनै पनि क्षण हुन सक्छ। एक जना विद्वान्ले बस पछिल्लो केही वर्ष मा 167 converging सुराग सूची। निम्न आठ छन्: इस्राएलको rebirth। येशूले भविष्यवाणी गरेझैं यहूदीहरूलाई ई 70 (लूका 21:24) को यहूदी-रोमी युद्ध समयमा छरिएका थिए। पनि ख्रीष्टको फिर्ती अघि उत्पन्न गर्न भविष्यवाणी, इस्राएल राष्ट्रलाई मई 14 मा, 1948. इस्राएलका भनिन्छ ...	Read More »
नेपाली ख्रीष्टियन समूहहरु पोका परेर बसेका छन् ।
नेपाल बाइबल सोसाइटी : महासचिव तेज जिरेल हामी ख्रीष्टियनलाई विविसीको साझा सवाल एक कार्यक्रम बोलायो । बोल्यों तर प्रसारण गरिएन । हाम्रा आवाजलाई रोक्ने काम राष्ट्र र मिडियाले गर्दै आइरहेको छ । त्यसमा पनि हामीभित्रै समस्या छ ।विभिन्न ख्रीष्टियन समूह छन्, यी सबै समूह पोका परेर वसेको अवस्था छ । पोका परेका ख्रीष्टियनहरू विच कसरी एकता हुन्छ ? यो अवस्थामा हामीले ...	Read More »
सत्यताले हाम्रो जिवनलाई परिवर्तन गर्दछ ।
सत्यताले मानिसहरुलाई स्वतन्त्र बनाउछ पबित्र बाईबल यहुन्नाको किताब ८ः३२ पदमा लेखिएको छ । यही सत्यतालाई हडसन टेलरले पाएको कारण चाइनामा गएर सुसमाचार सुनाए त्यसपछी उनको मन प्रकाश र शान्तिले भरियो । हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ प्रभुले हाम्रो लागी के गर्नु भयो र हामीले प्रभुको लागी के ग¥यौ ? के म प्रभुलाई म संग बोल्ने अनुमति दिन्छु ? के म संग ...	Read More »
Mero Pyaro Desh – Jyoti Kumar Sunuwar (Lok) & Sushma Bishwakarma | New Nepali Patriotic 2015
New song Bageko Aasu : Jyotikumar Sunuwar
नेपाली चर्चको एक न्युज
Songs : Batasai Le
जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ मैले निराशामा शान्ति पाएँ।